SOMALILAND OO KA QEYB GASHAY KULANKA BAARLAMAANKA MIDOWGA YURUB | WWW.SOMALILAND.NO
SOMALILAND OO KA QEYB GASHAY KULANKA BAARLAMAANKA MIDOWGA YURUB
Brussels (sl.no) 17 may 2008 – Warbixin ay Wakaallada Wararka ee AP ka qortay kulan ay isugu yimaadeen Baarlamaanka Yurub iyo dalalka aan la aqoonsan oo ay ugu horayso Somaliland, ayaa waxay si hufan uga hadashay Somaliland iyo waxyaabaha u qabsoomay dhaqaale dibadeed la’aanteed.
Warbixintan oo soo xiganaysa Wakiilka Somaliland ee Midowga Yurub, oo kulankaa ka qayb galay, ayaa iyada oo dhamaystiran oo aanu idiin soo turjunnay u dhignayd sidan;
“ Waxay leeyihiin Baarlaman shaqaynaya, lacag u gaar ah iyo dhaqaale taabba-gal ah oo ay kor u qaadeen boqollaal Milyan oo Dollar oo ay soo diraan Qurba-jooggu. Ilaa hadda Aqoonsi caalami ahi waxa uu ka mid yahay riyada Somaliland.
Wakiillo ka kala socday Jamhuuriyadda gaarka u go’day ee Waqooyiga Somalia (Somaliland) iyo 40 gobol oo kale oo ka yimi galbeedka Afrika ilaa bariga Eeshiya, waxay la kulmeen Jimcihii shalay Barlamaanka Yurub, si ay cadaadis ugu saaraan alkumiddooda. Qaar ka mid ah ayaa waxay waydiisteen inay u aqoonsadaan dalal Madax bannaan, halka qaar kalena ay ka dalbadeen in kor loo qaado wacyigelinta dalalkooda ama qabaa’iladooda, si ay meesha uga baxaan caddaadisyada dawladda ka hor imanaya.
‘Waxaanu ku rejo waynahay in aqoonsigu si dhaqso ah u iman doono. Waxyaabo badan ayaanu ka qabsanay dhinacyada dib-u-dhiska, kor-u-qaadista Dugsiyada iyo Qalabka Biyaha. Waxaanu leenahay Ciidan Milatari, Bangi dhexe, Ciidamo Xeeb-ilaalineed oo ilaaliya xeebtayada dhererkeedu yahay 900km (560Mayl)’ Sidaa waxa kulankaa ka yidhi Maxamuud A. Dacar, wakiilka Somaliland ee Midowga Yurub.
Kulankan waxa soo qabanqaabiyay Ururka Dalalka iyo dadka aan la aqoonsan (Unrepresented Nations and Peoples Organization – UNPO). Kaas oo in ka badan 70 gobol oo adduunyada daafaheeda ah uga ololeeya Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub.
Shirkan oo lagaga dooday Dalalka ka midka ahaa dalalka aan la aqoonsan ee taabba-galka ah. Waxaana ka mid ahaa waxyaabaha ka hadlayay sidii loo heli lahaa dhaqaale ka yimaadda Hay’adaha Caalamiga ah. Kaas oo lagula tacaalo dhibaatooyinka Caafimaad, inay qayb ka noqdaan Ururka Caafimaadka adduunka ee WHO iyo ilaalinta nabadgelyada Maddaarada waddamada aan la aqoonsan. ‘Kulankan UNPO ma ahayn in laga jeediyo Madax-bannaanida dalalkan oo ah arrin aad u adag, layskagana soo hor jeedo. Laakiin, wuxuu ahaa in laga wada xaajoodo runta ah in dalalkani aan la aqoonsani jiraan oo ay shaqeeyaan, una gudbeen marxalado Waddan’ Sidaa waxa lagu yidhi Warsaxaafadeed uu Ururkani soo saaray.
Wakiilka Somaliland ee Midowga Yurub, waxa uu tilmaamay caqabadaha nololeed ee ka jira waddan aan la aqoonsan. Dhaqaalaha waddanka aan la aqoonsan ee ku yaala Geeska Afrika, kaas oo ku dhawaaqay Madaxbannaanidiisa uu ka madax-banaanaaday Somalia-yada qalalaasaha sanadkii 1991-kii, ayaa iskii isku dhisay. Maxaa yeelay, dhaqaale kama heli karaan Hay’adaha, sida Baanka Adduunka. Waxay lacag iyo dhaqaale ka soo saartaa dhoofinta Xoolaha nool, waxaanay boqollaal Milyan oo Dollar ka heshaa caadiyan dadka reer Somaliland eek u nool Dibedaha. Somaliland waxay heshiis iskaashi la saxeexdeen dalka ay deriska yihiin ee Itoobiya, laakiin ka ganacsi ee dalalka kale, ayaa ah mid si aan qorshe lahayn loo bilaabay.
Maxamed A. Dacar, Wakiilka Somaliland waxa uu sheegay inay ku rejo wayn yihiin in Midowga Afrika, oo hore sanadkii 2005 wefti xaqiiqo-raadin ah u soo diray Somaliland, ay ka shaqayn doonaan aqoonsiga Somaliland. ‘Waxaanu ka xasalloonahay qaar badan oo ka mid ah dalalka nagu xeeran’ ayuu yidhi Dacar.”
« Wararkii u Dambeeyey ee Kulamada Xukuumadda iyo Hoggaamiyeyaasha Mucaaradka Laba baabuur oo waday lacag gaadhaysa 350 milyan oo lagu qabtay kaantaroolka barri ee Laascaanood. »